Izinzuzo ezi-5 eziphezulu zokuthatha i-Phosphatidylserine (PS) -Igunyaziwe
Ikhaya > I-Phosphatidylserine (PS)
Ngokubona kwethu, i- Phosphatidylserine isengezo esihle kunazo zonke esikhona manje emakethe esivela eCofttek. Sethula izizathu zethu ukuxhasa lolu khetho. Okokuqala, lesi sithasiselo sinikeza inani elingcono kakhulu lemali - olwandle lwemikhiqizo ebiza kakhulu, le phosphatidylserine supplement iwela ohlangothini olungabizi. Okwesibili, lokhu okungezelelwa yiCofttek kwenziwa endaweni ehloliwe ngakho-ke, ikhwalithi yayo ingahlolwa. Umkhiqizo ubuye wahlolwa ubumsulwa namandla. Ngakho-ke, uma ufuna ukuthenga isengezo esihle sePhosphatidylserine, sicela uxhumane nathi ku cofttek.com.
I-Phosphatidylserine (PS) Imibuzo Evame Ukubuzwa
Yini i-Phosphatidylserine (PS)?
I-Phosphatidylserine (PS) i-phospholipid kanye nenhlanganisela esondelene kakhulu nefayibha yokudla evame ukutholakala kwezicubu zomzimba womuntu. I-Phosphatidylserine ibamba iqhaza elibalulekile ekunqandeni umsebenzi futhi ibalulekile ekusebenzeni kwengqondo njengoba i-Phosphatidylserine isiza ngokudluliswa kwemiyalezo phakathi kwamangqamuzana ezinzwa.
Ngokwesilinganiso, ukudla kwaseNtshonalanga kuhlinzeka cishe nge-130 mg yePhosphatidylserine nsuku zonke. Izinhlanzi nenyama ziyimithombo emihle ye-Phosphatidylserine, etholakala futhi ngamanani ayincithakalo kwimikhiqizo yobisi nemifino. ISoy lecithin ngomunye umthombo omuhle wePhosphatidylserine. Kodwa-ke, noma i-Phosphatidylserine ingakhiwa umzimba futhi idliwe ngokudla ngendlela yemithombo yemvelo, ucwaningo olwandulelayo lukhombisa ukuthi amazinga ayo ancipha ngobudala. Ngakho-ke, lezi zinsuku, i-Phosphatidylserine supplementation iyakhushulwa, ikakhulukazi kubantu asebekhulile ababhalisa noma ikuphi ukwehla kwememori nomsebenzi wokuqonda.
Eminyakeni embalwa edlule, isidingo sezithasiselo ze-Phosphatidylserine sikhuphuke kakhulu njengoba izengezo ze-Phosphatidylserine zibhekwa njengekhambi lemvelo lezimo ezahlukahlukene, njengokukhathazeka, i-Alzheimer's, ukunakekelwa kokushoda-ukungasebenzi kahle kwengqondo, ukucindezeleka, ingcindezi kanye ne-multiple sclerosis. Lokho ngaphandle, izithasiselo ze-Phosphatidylserine ziyaziwa futhi ukukhulisa ukuphuma komzimba, ukusebenza komzimba, imizwa yokulala nokulala.
Kulesi sihloko, eceleni kokuxoxa ngemisebenzi eminingi esemqoka nezinzuzo ze-Phosphatidylserine, sizophinda simbele ngokujulile ukudalula isengezo esihle kakhulu se-Phosphatidylserine okwamanje esikhona emakethe.
Yini enhle i-phosphatidylserine?
Ingabe i-phosphatidylserine iyasebenza ngempela?
Ukuthatha i-phosphatidylserine kungathuthukisa ezinye zezimpawu zesifo i-Alzheimer's ngemuva kwamasonto ayisithupha kuya kwayisithupha okwelashwa. Kubonakala kusebenza kakhulu kubantu abanezimpawu ezingezinkulu kangako. Noma kunjalo, i-phosphatidylserine ingahle ilahlekelwe ukusebenza kwayo ngokusetshenziswa okunwetshiwe.
Ingabe i-phosphatidylserine ikwenza uzele?
I-Phosphatidylserine iyisengezo se-phospholipid sokudla okunomsoco esivimba ukukhiqizwa kwe-cortisol emzimbeni, okuvumela amazinga we-cortisol angenampilo ukwehla, futhi ngenxa yalokho, ukulala okuphumule kakhudlwana kwenzeke.
Ziyini izinzuzo ze-phosphatidylserine?
Ake sibheke ezinye izinzuzo ezibalulekile ze-Phosphatidylserine (PS):
① Kuyindlela Efanele Yokwelashwa Ebhekene Nokwehla Kwengqondo Nokuwohloka Komqondo
Ucwaningo lokuqala olwenziwe ezilwaneni lwembula ukuthi ukwengezelwa isikhathi eside kwePhosphatidylserine kunciphisa izinga lokwehla kwengqondo noma kulibuyisela emuva ngokuphelele kumagundane. Ukulandela lezi ziphetho ezinhle, kwenziwa izifundo zokuhlaziya umphumela wokudla kwe-Phosphatidylserine kubantu kanye nezifundo eziningana eziqinisekisa iqiniso lokuthi i-200 mg efakwe ngaphakathi ye-Phosphatidylserine ezigulini ze-Alzheimer inyusa izinga le-dopamine ne-serotonin, ama-hormone amabili abhalisa ukwehla okukhulu ngenye indlela ngenxa yesimo. Okubaluleke nakakhulu, i-Phosphatidylserine nayo yenza umsebenzi obalulekile wokulondoloza imetabolism ye-glucose, nayo enikeza ukukhululeka kulesi sifo. (2) Kushicilelwe: Phosphatidylserine nobuchopho bomuntu
② Isetshenziselwa Ngokuvamile Umphumela Wayo weNootropic
I-Phosphatidylserine i-supplement ivame ukunqunyelwa kubantu asebekhulile ukuthuthukisa ukunaka kwabo kanye namakhono okucabanga ancipha. Ucwaningo lokuqala olufunde umphumela we-Phosphatidylserine ekusebenzeni kwememori kubantu asebekhulile abanokulimala kwengqondo okungeyona eye-pathological luxhumanise ukunakekelwa kwePhyshatidylserine okususelwa izinyanga ezi-300 izinyanga ezintathu ngememori ebonakalayo ethuthukisiwe. Kamuva futhi olunye ucwaningo lwahlola imiphumela yamafutha enhlanzi uPhosphatidylserine kwimemori futhi lwembula ukuthi i-Phosphatidylserine supplementation yathuthukisa ukukhumbula kwamagama kubantu asebekhulile ngama-42%. Ngakho-ke, i-Phosphatidylserine ngokuqinisekile inomphumela we-nootropic emzimbeni. Kodwa-ke, ucwaningo ngokusebenza ngempumelelo kwe-Phosphatidylserine eyenziwe isitshalo ekuvimbeleni ukulahleka kwememori okuhlobene nobudala alinganiselwe futhi umsebenzi omningi uyadingeka kule ndawo.
Ukutholwa kwe-Phosphatidylserine nakho kuhlotshaniswa nokusebenza okuthuthukisiwe kokuzivocavoca
Umbiko oshicilelwe kwiSports Medicine uveze ukuthi kunobufakazi obanele bokufakazela ukuthi i-Phosphatidylserine supplementation ixhunyaniswe nokusebenza kwezemidlalo okuthuthukisiwe namandla okuzivocavoca umzimba. Ucwaningo luphinde lwasho ukuthi ukwengezwa kwe-Phosphatidylserine njalo njalo kunciphisa ukukhathazeka kwemisipha kanye nengozi yomuntu yokulimala. Ngokufanayo, olunye ucwaningo luveze ukuthi ukwengezwa kwePhosphatidylserine amasonto ayisithupha kuthuthukise indlela abagibeli begalufu abaphuma ngayo futhi ukuhlanganisa i-Phosphatidylserine ne-caffeine novithamini kunciphisa imizwa yokukhathala ngemuva kokuzivocavoca. Kodwa-ke, kufanele kukhunjulwe ukuthi lokhu kuthuthukiswa akumakiwe kakhulu.
④ I-Phosphatidylserine Isiza Ukulwa Nokucindezeleka
Ngo-2015, ucwaningo olushicilelwe kwiMental Illness lwembula ukuthi kubantu abaneminyaka engama-65 nangaphezulu, ukudla okuvamile kwePhosphatidylserine, DHA ne-EPA kunganciphisa ukudangala. Ngokufanayo, olunye ucwaningo luveze ukuthi i-Phosphatidylserine supplementation ikhuthaza imizwa yokwaneliseka nenjabulo ngemuva kweseshini yokuzivocavoca ngokunciphisa izinga le-cortisol ebangelwa ukucindezeleka okungukuthi i-hormone yokucindezeleka.
Can Ingasetshenziselwa Ukwelapha i-ADHD Ezinganeni
Ucwaningo lwango-2012 lufunde imiphumela ye-Phosphatidylserine ezinganeni ezine-ADHD noma ukunaka ukuntuleka kwe-hyperactivity. Izingane ezingama-200 ezine-ADHD zabamba iqhaza ocwaningweni, okwaphetha ngokuthi amasonto angama-15 ukwelashwa kusetshenziswa i-Phosphatidylserine ngokuhlangana ne-omega-3 fatty acids kwasebenza ekwelapheni i-ADHD. Izingane ezinikezwe le nhlanganisela ezibhalisiwe zinciphise ukusebenza kwe-hyperactive noma okungenakuphoqelela nomoya othuthukisiwe. Ngo-2014, kwenziwa olunye ucwaningo lokuhlaziya i-phosphatidylserine ukuze ifakwe ezinganeni ezingama-36 ezihlushwa i-ADHA izinyanga ezimbili. Ekupheleni kwesifundo, iqembu lokwelashwa libonise ukuthuthukisa inkumbulo nokunakwa.
Ngaphandle kwezinzuzo ezishiwo ngenhla, i-Phosphatidylserine supplementation nayo ixhumene nomthamo wokugijima we-anaerobic, ukuncipha kokuncipha kanye nokwenza kangcono ukunemba kanye nesivinini.
Yini ukwakheka kwe-phosphatidylserine?
I-Phosphatidylserine iyi-phospholipid-ikakhulukazi i-glycerophospholipid-enama-acids amabili anamafutha ahlanganiswe nokuxhumeka kwe-ester kukhabhoni yokuqala neyesibili ye-glycerol ne-serine enamathiselwe ngokuxhuma kwe-phosphodiester kuya kukhabhoni yesithathu ye-glycerol.
Kungani Sidinga i-Phosphatidylserine (PS)?
Ngezinye izinsuku, ubuchopho bethu buzizwa sengathi buminyene futhi abukwazi ukwenza noma yimuphi umsebenzi. Ezimweni eziningi, lokhu kwenzeka ngenxa yokwenqaba kokusebenza kwengqondo, isimo esivame kakhulu kubantu abadala kepha esingajwayelekile kubantu abadala abasebasha. Eminyakeni embalwa edlule, ososayensi nabaphenyi bakhombise ukuzethemba okukhulu emandleni kaPhosphatidylserine wokwelapha ukuncipha kokusebenza kwengqondo. Okubaluleke kakhulu, ucwaningo olukhulayo kule ndawo luveze abantu kwezinye izinzuzo ze-Phosphatidylserine, njengamandla ayo okwelapha izimo, njengesifo i-Alzheimer's kanye ne-ADHD kanye nokukwazi kwayo ukukhulisa ukulala nokwenza ngcono imizwa.
Ngaphambi kokuthola imininingwane yalokho okwenziwa yiPhosphatidylserine ngomzimba womuntu, ake siqale siqonde ukuthi yini iPhosphatidylserine (PS).
Yini ukusetshenziswa kwePhosphatidylserine (PS)?
Eminyakeni embalwa edlule, ukufunwa kwama-Phosphatidylserine supplements kukhuphuke kakhulu ngenxa yokusetshenziswa okuningi kwe-Phosphatidylserine (PS). Okokuqala, i-Phosphatidylserine iyasebenza kakhulu ekuthuthukiseni umsebenzi wokuqonda nokunciphisa ukwehla kwengqondo. Ngokufanayo, futhi kukhombisile ukuthi kuyasebenza ekulweni ne-ADHD ezinganeni nakubantu abadala futhi ibhekana kahle nokucindezela okubangelwa ukuvivinya umzimba ngokunciphisa amazinga e-cortisol emzimbeni. Kuyaziwa futhi ukukhulisa ukunaka komuntu, inkumbulo yokusebenza nokukhipha ukuvivinya umzimba.I-Phosphatidylserine yaziwa nangokuthi iyisikhuthazi semizwa nokulala. Ngenxa yazo zonke lezi zizathu nokuningi, ukufunwa kwama-Phosphatidylserine supplements kukhuphuke kakhulu kule minyaka embalwa edlule.
Ngingakanani i-phosphatidylserine okufanele ngiyithathe ukwehlisa i-cortisol?
Umthamo ofanele we I-Phosphatidylserine (PS) kuya ngenzuzo okwenzelwa yona. Ukuvumelana okujwayelekile ukuthi isilinganiso esijwayelekile se-100 mg, sithathwa kathathu ngosuku, ngaleyo ndlela sifinyelela ku-300 mg nsuku zonke, siphephile futhi sisebenza ngokumelene nokwehla kwengqondo. Ngakolunye uhlangothi, lapho i-Phosphatidylserine isetshenziselwa ukwelapha i-ADHD, isilinganiso esijwayelekile esingu-200 mg ngosuku sithathwa njengesihle ezinganeni kanti ama-400 mg ngosuku athathwa njengelungele abantu abadala. Kwi-Alzheimer's, umthamo ka-300-400 mg ubhekwa njengudingekayo. Uma isengezo se-Phosphatidylserine sisetshenziselwa ukuthuthukisa ukuphuma kokuvivinya umzimba, abasebenzisi bacelwa ukuthi bangeqi umkhawulo wesilinganiso esingu-300 mg ngosuku.
Uwehlisa kanjani amazinga e-cortisol?
Ungathatha ukwesekwa kwe-PS ngosuku izinsuku eziyishumi ukuphendula kwe-cortisol enamafutha ngaphambi nangesikhathi sokucindezeleka okubangelwa ukuvivinya umzimba.
Yini i-cortisol emzimbeni wakho?
ICortisol iyi-hormone ye-steroid elawula izinqubo ezahlukahlukene kuwo wonke umzimba, kufaka phakathi imetabolism kanye nokuphendula komzimba. Futhi kunendima ebaluleke kakhulu ekusizeni umzimba ukuthi uphendule ekucindezelekeni.
Ngakanani i-phosphatidylserine eku-lecithin yesoya?
Izingxenye eziyinhloko ze-lecithin etholakala kusoya enentengiso yilezi: u-33-35% kawoyela weSoybean. 20-21% I-Phosphatidylinositols. I-19-21% i-Phosphatidylcholine.
I-Phosphatidylserine itholakala ku-soy lecithin cishe ku-3% we-phospholipids ephelele.
Kufanele uyithathe nini i-phosphatidylserine?
I-Phosphatidylserine isebenza esigabeni sokuqala, lapho amazinga e-cortisol ephezulu. Kungcono ukuthathwa lapho amazinga e-cortisol ephezulu kakhulu. Isibonelo, ngabe uvuka ube sesimweni sokuxineka ngenxa yengcindezi yomsebenzi? Yithathe ekuseni ukuvimbela ukukhathazeka nokukhuphuka kwengcindezi.
Ingabe i-phosphatidylserine kufanele ithathwe ebusuku?
I-Phosphatidylserine (PS 100; thatha eyodwa kuye kwababili ngesikhathi sokulala). I-Phosphatidylserine iyisengezo se-phospholipid sokudla okunomsoco esivimba ukukhiqizwa kwe-cortisol emzimbeni, okuvumela amazinga we-cortisol angenampilo ukwehla, futhi ngenxa yalokho, ukulala okuphumule kakhudlwana kwenzeke.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi i-phosphatidylserine iqale ukusebenza?
Ukuthatha i-phosphatidylserine kungathuthukisa ezinye zezimpawu zesifo i-Alzheimer ngemuva kwamasonto ayisithupha kuya kwayisithupha okwelashwa. Kubukeka sengathi kusebenza kahle kubantu abanezimpawu ezingekho zimbi kangako.
Imiphi imiphumela emibi ye-phosphatidylserine?
I-Phosphatidylserine ingadala imiphumela emibi efana nokuqwasha nokucasuka kwesisu, ikakhulukazi ngemithamo engaphezu kuka-300 mg. Kunokukhathazeka okuthile ukuthi imikhiqizo eyenziwe ngemithombo yezilwane ingadlulisa izifo, ezinjenge-mad cow disease.
Uyini umehluko phakathi kwe-L serine ne-phosphatidylserine?
I-L-serine iyi-amino acid ebalulekile ekuhlanganisweni kwe-phosphatidylserine, okuyingxenye yolwelwesi lwamaseli obuchopho (okungukuthi, ama-neurons). Ingakhiqizwa emzimbeni, kufaka phakathi ubuchopho, kepha ukunikezwa kwangaphandle okuvela ekudleni kubalulekile ekugcineni amazinga adingekayo.
Yini ebangela ukushoda kwe-serine?
Ukuphazamiseka kokushoda kwe-Serine kubangelwa ukukhubazeka kolunye lwama-enzyme amathathu wokuhlanganisa wendlela ye-L-serine biosynthesis.
Wenzani uL Tyrosine emzimbeni?
Ungabona i-tyrosine ithengiswa ngefomu lokungezelela nge- "L." I-Tyrosine ikhona kuzo zonke izicubu zomzimba womuntu nakokuningi koketshezi lwayo. Isiza umzimba ukukhiqiza ama-enzyme, ama-hormone e-thyroid, kanye ne-melanin yesikhumba. Kuyasiza futhi emzimbeni ukukhiqiza ama-neurotransmitters asiza amangqamuzana ezinzwa ukuthi axhumane.
Uyini umsebenzi weSerine?
I-Serine iyi-polar amino acid edlala indima ebaluleke kakhulu ekuguqulweni kwesitshalo, ekukhuleni kwezitshalo nasekusayineni kwamaseli. Ngaphezu kokuba yisakhi samaprotheni, uSerine ubamba iqhaza ku-biosynthesis yama-biomolecule afana nama-amino acid, ama-nucleotide, i-phospholipids, ne-sphingolipids.
Yini ukudla okuphezulu kwi-phosphatidylserine?
Ungakhuphula izinga lokudla kwakho i-phosphatidylserine yize ukudla — kutholakala ekudleni okuningana, kufaka phakathi i-soy (okuwumthombo oyinhloko), ubhontshisi omhlophe, izikhupha zamaqanda, isibindi senkukhu kanye nesibindi senyama yenkomo.
Ziyini izinzuzo zezempilo ze-phosphatidylserine?
Amavithamini, amaminerali, kanye ne-micronutrients ku-phosphatidylserine kunikeza izinzuzo ezithile ezibalulekile zezempilo. I-Phosphatidylserine yaziwa ngokusebenza njenge-antioxidant, esiza ukunciphisa imiphumela yama-radicals ayingozi emzimbeni wakho. Lokhu kungasiza ekwehliseni ubungozi bokuba nezimo ezinjengesifo sikashukela nomdlavuza.
Isebenza kanjani i-phosphatidylserine njengophawu lwe-apoptosis?
Ama-scramblases we-phospholipid womuntu (hPLSCRs) adlala izindima ezibalulekile ezinqubweni eziyinhloko zamaselula. I-hPLSCR1 ibangela i-apoptosis nge-phosphatidylserine exposure mediated phagocytosis. I-hPLSCR3 ixazulula ukuvezwa kwe-cardiolipin Mediated apoptosis e-mitochondria.
Ingabe i-phosphatidylserine i-amino acid?
I-L-serine iyi-amino acid ebalulekile ekuhlanganisweni kwe-phosphatidylserine, okuyingxenye yolwelwesi lwamaseli obuchopho (okungukuthi, ama-neurons). Ingakhiqizwa emzimbeni, kufaka phakathi ubuchopho, kepha ukunikezwa kwangaphandle okuvela ekudleni kubalulekile ekugcineni amazinga adingekayo
Yini indima enkulu yePhosphatidylethanolamine?
I-Phosphatidylethanolamine ibamba iqhaza ekuhlanganisweni kwe-lactose permease namanye amaprotheni e-membrane. Isebenza 'njengompheki' ukusiza amaprotheni e-membrane ukugoqa kahle izakhiwo zabo zemfundo ephakeme ukuze bakwazi ukusebenza kahle.
Ingabe i-phosphatidylserine lipid?
I-Phosphatidylserine (PtdSer), okuyisici esibalulekile sezinambuzane ze-eukaryotic, yi-anionic phospholipid eningi kakhulu ekubalweni kweseli le-eukaryotic kuze kube ngu-10% we-lipid yeselula ephelele. Okuningi okwaziwayo ngePtdSer yindima edlalwa nguPtdSer ekwi-apoptosis nasekunqandeni igazi.
Isebenziselwa ini i-phosphatidylcholine?
I-Phosphatidylcholine nayo isetshenziselwa ukwelapha i-hepatitis, i-eczema, isifo se-gallbladder, izinkinga zokujikeleza kwegazi, i-cholesterol ephezulu, ne-premenstrual syndrome (PMS); ukwenza ngcono ukusebenza kwe-dialysis yezinso; ukukhulisa amasosha omzimba; nokuvikela ukuguga.
Ingabe i-phosphatidylserine i-zwitterionic?
Amaprotheni anjalo abopha kabi i-phospholipids (i-cardiolipin, i-phosphatidylglycerol, i-phosphatidylserine, i-phosphatidylinositol) kodwa hhayi i-zwitterionic noma i-phospholipids engathathi hlangothi (i-phosphatidylethanolamine, i-phosphatidylcholine).
Ngabe i-phosphatidylserine ifana ne-phosphatidylcholine?
I-phospholipids phosphatidylserine (PS) ne-phosphatidylcholine yizinto zesibili ezivunyelwe kakhulu kubantu abadala abanezikhalazo zememori ngabanikazi bezithako zokudla.
Ingabe i-phosphatidylcholine cholesterol ephansi?
I-Oral polyunsaturated phosphatidylcholine inciphisa okuqukethwe yiplatelet lipid ne-cholesterol kumavolontiya anempilo.
Ingabe i-phosphatidylserine iyasiza ekunciphiseni isisindo?
Ngamafuphi, i-phosphatidylserine iyasiza ekwehliseni isisindo ngokulawula amazinga e-cortisol. Nakhu ukuthi kusebenza kanjani: ekuphenduleni ukucindezeleka, izindlala ze-adrenal zikhiqiza i-hormone ebizwa ngokuthi i-cortisol. Ingena ngokushesha egazini futhi ikuvumela ukuthi ubhekane kangcono nezimo zangaphandle.
Ingabe i-Phosphatidylserine (PS) Iphephile?
Ucwaningo olwenziwe kuze kube manje luveza ukuthi i-Phosphatidylserine ibekezeleleka kahle emzimbeni futhi uma ithathwa ngomlomo, kuphephile ukuthatha i-Phosphatidylserine izinyanga ezifika kwezingu-3 ngomthamo wansuku zonke ongeqi ku-300 mg ngosuku. Izingane zingathatha lezi zithasiselo izinyanga ezifika kwezine. Kodwa-ke, ukweqa umthamo wansuku zonke ongaphezu kwama-4 mg ngosuku kungaholela emiphumeleni emibi njengokuqwasha nezinkinga zesisu. Abesifazane abakhulelwe nabancelisayo kufanele bahlale kude nezithasiselo ze-Phosphatidylserine ngoba abukho ubufakazi obanele bokufakazela ukuthi lezi zithako ziphephile kula maqembu.
Abantu abaningi bathanda izithasiselo ezenzelwe isitshalo uPhosphatidylserine njengoba kukholakala ukuthi izengezo ezisuselwa ezilwaneni ziveza abasebenzisi kwizifo ezihlobene nesilwane. Kodwa-ke, akukho cwaningo lokucwaninga olutholayo obukhona ubufakazi obuphathekayo bokusekela lo mbono.
Ungawuthengaphi Powder Phosphatidylserine (PS) ngobuningi?
Noma ngabe uyinkampani ekhiqiza amaphilisi we-Phosphatidylserine noma umuntu ofuna ukuthenga i-Phosphatidylserine (PS) powder ngobuningi nganoma yiziphi ezinye izinhloso, indawo enhle yokuthenga cofttek.com.
ICofttek ingumkhiqizi wezinto ezingasetshenziswanga obelokhu esemakethe kusukela ngo-2008. Le nkampani izibophezele ekukhiqizeni imikhiqizo esezingeni eliphakeme futhi ineqembu labacwaningi abanamakhono nabanolwazi abasebenza ubusuku nemini ukuqinisekisa ukuthi abathengi bathola okungcono imikhiqizo yekhwalithi yemali yabo. ICofttek isivele inamakhasimende namakhasimende ezingxenyeni ezahlukahlukene zaseNdiya, China, Europe naseNyakatho Melika. Futhi inethimba lokuthengisa elizinikele eliqinisekisa ukuthi wonke amaklayenti enkampani aphenduka amakhasimende ajabule. I-Phosphatidylserine powder enikezwa yi-Cofttek iza ngamaqoqo angama-25 kilograms futhi ingathenjwa ngokuyimpumputhe ngekhwalithi nokuthembeka. Ngakho-ke, uma ubheke ku- thenga i-Phosphatidylserine (PS) powder ngobuningi, ungathengi kwenye indawo kepha eCofttek.
(2) Kuthunyelwe: I-Phosphatidylserine nobuchopho bomuntu
(3) Imiphumela ye-phosphatidylserine supplementation ekusebenziseni abantu
(4) I-lecithin phosphatidylserine ne-phosphatidic acid complex (PAS) inciphisa izimpawu ze-premenstrual syndrome (PMS): Imiphumela yesilingo somtholampilo esilawulwa ngokungahleliwe, esilawulwa yi-placebo, futhi esiyimpumputhe
(5) Isayensi ngqo: Phosphatidylserine
(13) Izinzuzo ezi-5 eziphezulu zokuthatha i-pyrroloquinoline quinone (pqq).